Uthando, isondo kunye ne-Intanethi | ISiseko soMvuzo
Ikhaya Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
"Yintoni uthando?" yenye yezona zinto zikhangelwa kwi-intanethi. Ukuqukunjelwa kwesifundo seGrant, uphando lweminyaka engama-75 kwiYunivesithi yaseHarvard, yayikukuba "ulonwabo luthando". Kubonakalisile ukuba ubudlelwane obufudumeleyo sisiseko esifanelekileyo sempilo, ubutyebi kunye nobomi obude. Ngokwahlukileyo, umlutha, uxinzelelo kunye ne-neurosis zezona ngxaki ziphambili kule meko inqwenelekayo. Ukuqonda imingcipheko ejikeleze ukusetyenziswa kwe-intanethi kubalulekile ukuba sifuna ukunqanda ukutyibilika kwaye sifumane ulwalamano lothando olwanelisayo endaweni yoko. Ukufumana uthando, isondo kunye ne-intanethi kubaluleke kakhulu.
Kule candelo I-Foundation Reward ihlola iindlela ezahlukeneyo zabantu abasebenzisana kuzo ubomi babo. Yintoni eyenza ubudlelwane busebenze? Ungayithanda njani kwaye uhlale othandweni? Ziziphi iingcingo ezinokukuhambela?
Sigxila kwisayensi yobudlelwane obunempumelelo. Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ujonge isiseko sebhayoloji kunye nesayensi yengqondo ukuze konke kube nengqondo. Iziphumo zeCoolidge zinamandla ngakumbi.
• Yintoni uthando?
• Uthando nje ngoBonding
• Ababini Bonding Bonding
• Uthando njengesifiso soSondo
• I-Coolidge Impact
• Ukunciphisa isifiso socansi
• Isini kunye ne-Porn